सञ्चार/ प्रविधि – Page7– धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
ब्याट्री सकिएला भन्ने चिन्ता छ ? अब पर्सबाटै मोबाइल चार्ज
कुनै पनि बेला मोबाइलको ब्याट्री सकिएला भन्ने चिन्ता अब अन्त्य हुने देखिएको छ । किनभने, अब आफ्नै पर्सको सहायताले ब्याट्री चार्ज गर्न सकिने भएको छ । छालाबाट निर्मित यस्तो पर्सको चर्चा अहिले निकै व्यापक हुँदै गएको छ । पर्समा रहेको माइक्रो यूएसबी पोर्टको प्रयोग ट्याब्लेट र मोबाइल चार्जिङका लागि गर्न सकिने बताइएको छ । यो पर्सको डिजाइनका..
अनुसन्धानमा प्रभावकारी बन्दै पोलिग्राफ मेसिन
काठमाडौं : धादिङका श्यामकुमार श्रेष्ठले एक युवतीलाई बलात्कार गरेको भन्दै आफन्तले उनीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरे। जबरजस्ती करणी मुद्दामा उजुरी दिनुपर्नेमा आफन्तले सार्वजनिक मुद्दामा उजुरी दिए। प्रहरीले आफन्तकै विश्वासमा श्यामकुमारमाथि सार्वजनिक मुद्दा चलायो। गाउँका केही सर्वसाधारणले श्यामकुमारले अपराध गरेर पनि मुक्ति..
टचकनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शोरुम न्यूरोडमा
काठमाडौं । ‘टचकन’ ब्रान्डको अत्याधुनिक शोरुम काठमाडौंस्थित न्यूरोडमा स्थापना भएको छ । नेपालका लागि टचकनको आधिकारिक विक्रेता लेजर इन्फोटेक नेपाल प्रालिले ‘टचकन’का स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको विक्री वितरण तथा अवलोकनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शोरुम यहा“ स्थापना गर्न लागेको हो । उक्त शोरुमको घटस्थापनाको दिन उद्घाटन गरिएको..
रहरमा खुल्छन् रेडियो स्टेशन, चलाउन पर्छ धौ-धौ
सूचना र मनोरञ्जनको सहज माध्यम स्थानीय रेडियोको पहुँच सञ्चारमाध्यममध्ये सबैभन्दा बढी छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि निजी क्षेत्रमा एफएम रेडियो खुल्ने क्रम बढेसँगै यसका श्रोता पनि ह्वात्तै बढे । खासगरी रहरैरहरमा खोलिएका एफएममा कुशल व्यवस्थापन अभावका कारण समस्या छ । आम्दानीको स्रोत एकदमै सीमित भएकाले आर्थिक अभाव झेलिरहेका छन् ।..
ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस् है !
नयाँ डिजाइन तथा सुलभ मूल्यका ल्यापटपका आकांक्षीहरुको संख्या बढेसँगै विश्व बजारमा पछिल्लो समयमा ल्यापटपको डिजाइन तथा प्रविधिमा छलाङ आइरहेको छ । फलतः आफ्नो आवश्यकता तथा क्रय क्षमता अनुसारको ल्यापटपको खोजी तथा खरीदको विषय चुनौतिपूर्ण काम हो । बजेट, काम तथा रुचीबीच सन्तुलन मिलाएर ल्यापटप खरीद गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनु पर्छ : १...
मोबाइलमा फेसबुक च्याट गर्न मेसेन्जर डाउनलोड गर्नैपर्ने
फेसबुकले आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताका लागि फेसबुक च्याटका लागि म्यासेन्जर एप डाउनलोड अनिवार्य गर्ने भएको छ । गएको अप्रिलमा युरोपबाट यस्तो प्रयोग सुरु गरेर हौसिएको फेसबुकले अबका केही हप्तामा विश्वव्यापी रुपमै म्यासेन्जर एपलाई अनिवार्य बनाउन लागेको हो । फेसबुकमा अहिले गरिने च्याट भन्दा मेसेन्जर एपमार्फत हुने च्याटमा छिटो छिटो..
कम्प्युटरको ज्ञान नभएकालाई साक्षर मान्न सकिंदैन–महाविर पुन
धादिङ–कम्प्युटर सम्वन्धि आधारभुत ज्ञान नभएसम्म साक्षर भएको मान्न नहुने स्थानीय तहमा संचार तथा सूचना प्रविधिको विकासका लागि कृयाशिल व्यक्तित्व महाविर पुनले वताएका छन । इन्टरनेटको ज्ञान र प्रयोग नभए सम्म कम्प्युटरको महत्व नहुने र गाउं गाउंमा कम्प्युटरसंगै इन्टरनेटको पनि विस्तार आवश्यक भएको पुनको भनाई छ । शनिवार देखि धादिङबेसीमा..
इन्टरनेट चलाँउदा जोगिनुस्
इन्टरनेट, आमजनताको नेटवर्क भइसकेको छ । अब यसको अर्थ कम्प्युटरको जालो भनेर मात्र पुग्दैन । यसले हरेक मानिसलाई एक आपसमा जोड्न थालिसकेको छ । घट्दै गएका सूचना प्रविधि उपकरण र बढ्दो पहुँचले इन्टरनेट आम दैनिकीको एक अहम हिस्सा बनिसकेको छ । यतिखेर बजारमा मोबाइल फोन, ट्याब्लेट, ल्यापटपको मुल्य निक्कै तल झरिसकेको छ । डेक्सटप कम्प्युटरको मुल्य त..
सामाजिक सञ्जालका कुरा !
बिष्णु सामरी पहिले पहिले नयाँ नयाँ खबर,ताजा समाचार थाहा पाउन पर्‍यो भने कि त रेडियो नेपाल सुन्न पर्थ्यो कि त गोरखा पत्र पढ्न पर्थ्यो त्यसैले आजभोलि पनि जुनसुकै पत्रीका होस हाम्रा बा आमाहरु गोर्खापत्र भनेर पत्रीकालाई सम्बोधन गर्छन्। अब समाचार थाहा पाउन रेडियो सुन्न पत्रीका हेरिरहनु पर्ने अवस्था रहेन आजकाल सामान्य घट्ना देखी दर्दनाक..
फेसबुक चलाउँदा होशियार !
सामाजिक संजालमा तस्वीर राख्दा जेल परिने पक्षमाथि विचार गरौं। -गणेश आचार्य तपाईंले आजसम्म फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक संजालमा कतिपटक आफैंले खिचेका तस्वीर राख्नुभयो? अरुले खिचेको तस्वीर राखेको भए, कतिपटक त्यो फोटोग्राफरको नाम राख्नुभयो? कतिपटक ऊसँग सोध्नुभयो? कतिपटक लिखित सहमति लिनुभयो? सर्च इन्जिनहरुको तीव्र प्रयोग हुन थालेपछि..
इमेल र सोसल मिडियाका २० लाख पासवर्ड चोरिए, साबधानी अपनाउन सुरक्षाबिज्ञको सुझाव
यदि तपाई फेसबुक,ट्वीटर, गुगल, याहु लगायतका चर्चित इमेल र सामाजिक संजालको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै पासवर्ड परिवर्तन गर्नु बुद्धिमानी हुने छ । नेदरल्याण्डमा साइवर अपराधिहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेका साइवर सुरक्षा बिशेषज्ञहरुले हालै करिव २० लाख पासवर्ड ह्याक भएको पत्ता लगाएका छन् । पोनी बोनेट नामक भाइरसका माध्यमबाट..
विज्ञानसँग जोडिएको संस्कृति
-डिल्लीराज ज्ञवाली विज्ञान र संस्कृति दुई अलग विधा हुन्, दुई अलग विधा भएपनि यिनीहरुको बीचमा सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । यसरी २ अलग विधाहरु जब एक आपसमा सम्बन्धित हुन्छन् तब एउटाका मूल्य मान्यतालाई अर्को पक्षले बलियो बनाउन भूमिका खेल्दछ । विज्ञानको कुनैपनि ज्ञान जन्मदेख मृत्युसम्म पनि बुझेर सकिँदैन । तत्वको सानो परमाणुका बारेमा पनि हामीले..
फेसबुक, वास्तविक जिवनमा लाइफ बुक बनिसकेको छ। विश्वको सबैभन्दा चर्चित, लोकप्रिय यो सामाजिक सञ्जालमा दैनिक करोडौं मानिसहरु लगइन गर्छन् भने सयौंले आफ्नो एकाउन्ट बन्द पनि। लाइफ बुक कै रुपमा दैनिक फेसबुक चलाउनेहरु मध्ये धेरै यस्ता पनि हुन्छन् जसले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टका लागि प्रयोग भएको इमेल आइडी पनि बिर्सन्छन्। त्यसो त पासवर्ड..
घटना गत जेठ ३१ गतेको हो । साइबर अपराध (ठगी)को अभियोगमा दुई विदेशी नागरिकलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । नेपाली फूटबल क्लबमा खेलाडी तथा एजेण्टका रूपमा अनुबन्धित उनीहरूको पक्राउले सबैलाई आश्चर्यमा पार्‍यो । पक्राउ पर्नेमध्ये एक नाइजेरियाली नागरिक इकेचोकु जोन डाइकले जावलाखेल यूथ क्लबबाट पछिल्लो वर्ष ‘ए’ डिभिजन लीग खेलेका थिए ।..